प्रेयसी जाडोलाई - निष्पक्षखबर
ठ्याक्कै पाँच वर्षअघि
म यहीँ थिएँ— मिल्केको काखमा
जसरी छु यहीँ आज पनि
आज बेढङ्ग बेढङ्गमै
यो बेसोमती जाडो
किन इत्रिन्छ हँ ?
जाडोकै मौसम लडाइँ हुँदा
चौंरी चराउँदाचराउँदै हराएकी हुन्
यहीँ मुन्तिरको जङ्गलमा
र, भेटिएकी हुन् धेरैपछि
शायद यो शीतलहर
हराएकी मेरै प्रेयसीको आँसु हुनुपर्छ
शायद यो जाडो
हराएकी मेरै प्रेमिकाको सन्देश हुनुपर्छ
र, नै इत्रिँदैछ
— यो बेसोमती जाडो
निर्धक्क मसँग यसरी
म त फेरि छाडेर जानेछु यो ठाउँ
बिन्ती छ !
लगेर ओढाइ दिनू—
रातो गुराँसे सिरक
एक हूल किरणको फरिया
निगालोको एक काँटी सलाइ
प्रेयसी जाडोलाई !
थप ९ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५१६
विराटचोकः अमेरिकामा बसेर गीतलेखनमा सक्रिय गीतकार विजय दर्पण र सङ्गीतकार योगेशकाजीको पछिल्लो गीत ‘बारीको कर्कलो’ सार्वजनिक भएको छ । विष्णु माझी र बाबुकृष्ण परियारको स्वरमा रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
गोविन्द पराजुलीको रेकर्डिस्ट र एचबीएन किस्मतको मिक्सिङ तथा माष्टरिङ रहेको ‘बारीको कर्कलो’ मा निश्चल गुरुङ, सुरज लामिछाने, ज्ञानु परियार र जमुना सोनामको कोरस स्वर रहेको छ । राजकुमार मगरको निर्देशन तथा सम्पादन रहेको सार्वजनिक गीतको भिडियोमा प्रकाश सपुत र केकी अधिकारीलाई फिचरिङ गरिएको छ ।
अजय रेग्मीको छायाङ्कन तथा ड्रोन रहेको भिडियोमा राजीव समरको कोरियोग्राफी रहेको छ । विजय दर्पणका धेरै गीत स्रोता÷दर्शकमाझ लोकप्रिय छन् । योगेशकाजीसँगको पहिलो सहकार्यमा ‘नक्कली साली’ गीत सार्वजनिक भएको थियो ।
बलि चढाऊ मलाई
छवि वैरागी घिमिरे
आऊ माग म रक्त दिन्छु सजिलै द्यौ मृत्यु श्रद्धाञ्जलि
निर्दोषी पशु मार्न पर्दछ भने मेरो चढाऊ बलि।
मेरो रक्त निकाल गर्दन चुँडी ती देवका थानमा
छालाबाट बनिन्छ दाप खुकुरी हड्डी रहुन् ज्यानमा।।
धर्ती अम्बर होस्, मिलोस् रससुधा उत्साह नाच्दै रहोस्
बाँचून् जन्तु सबै नमार चिडिया यो रक्त साक्षी रहोस्।
मेरो ज्यान दिँदा समस्त पशुका उद्धार हुन्छन् भने
फाँसी चढ्न तयार हुन्छु सहजै ती जन्तु बाँच्छन् भने।।
अन्धो बन्छ समाज धर्म पथमा संस्कार पाखण्डको
लिन्छन् प्राण कठै! लुछेर मुटुमा कस्तो खुसी दण्ड यो ?
बन्छन् भोजन जन्तु मांस घरमा सम्मानका खातिर
त्यस्तै रोग र शोक हुन्छ जनमा चीत्कार छन् आखिर ।।
खोजी गर्छ मनुष्य धर्म मठमा हत्या र हिंसा गरि
जस्तै होस् धनवान् हिरण्य गहना हो दैत्य आडम्बरी।
पापैपाप भरिन्छ हिंस्रक बने ती दुष्ट हुन् दानव
यस्तै सोच भए विकास गतिमा के हुन्छ त्यो सम्भव।।
हत्यारा कसरी सुधारक भए यी प्रश्न छन् सज्जन
सेवा धर्म समाज मन्दिरतिरै पापी बढे झन्झन ।
आमा चिन्न सकिन्न नै यदि भने धर्ती कहाँ बाँच्तछिन्
नेता कानुन दुष्ट सन्तति भए धर्ती कहाँ हाँस्तछिन् ??